Fahmitaanka fikradda BIM, marka laga hadlayo Bentley Systems - Geofumadas
Nofeembar, 2012 Featured, tabo cusub, Microstation-Bentley
Shuruudaha la fududeeyay, BIM (Dhismaha Macluumaadka Dhismaha) ayaa ah horumarinta fikradda dhaqameed ee loo yaqaan CAD (Naqshad Kombuyuutarada Qalabka ah) iyo inkastoo ay jiraan buugaag oo dhan oo qoraal ah oo ku saabsan ereygan ka dib markii Jerry Laiserin loo yaqaan ereyga, ujeedooyin waxbarasho waxaan isku dayi doonaa in uu noqdo mid fudud oo suurtagal ah:
Ka horMarka la dhigaayo dhismo, naqshada ka dib markii wadajir ah oo wanaagsan oo marijuana sameeyey-beege ah sawir iyo saxba ah Muga filayaa, ka dibna wuxuu ahaa khadadka go'doon ka bilowda qeexaya qaybinta, iyo ugu dambayntii qaar ka mid ah faahfaahinta in ay gaartay heer ay deegaan. Waxa uu xiray uu shandad oo marayay dabaasha balliga inta ay xilka ka injineero kale oo injineerada doondoonay on a siyaabo kutubada inuu turjumo macluumaadka si takhasus siin doonaa si ay sifooyinka dhismaha, dhismaha, farsamo iyo dhaqaale ... ee gaaban, geedi dheer oo la xiray taas oo farsamooyin badani ku dhammaadeen QORSHOOYINKA HORUMARINTA.
Ra'yiga BIM wuxuu ku salaysan yahay habka keeno oo dhan ku daydo digital, maalin maalmaha ka mid ka georeferenced, la falanqayn nalalka, keydinta tamarta, xaaladda geotectonic tan iyo Muga ugu horeysay waxaa uuraysatay. Dhammaan geedi socodka naqshadeynta iyo dhismaha waa lala xiriirinayaa. Hawlaha horey iyo horayba u xanuunsanayay sida diyaaradaha Asaasiga ah ayaa lagu soo saarey horumarka dhismaha. Hawlgalku ma dhammaanayo dhismaha, laakiin waa bilowgii hawlgalka, sida sheyga oo u muuqda in mawduuc ka badan yahay mawduuc dhasha, koraayo, dhalin doono daryeelka iyo hal maalin ayaa dhiman doona.
Intii udhaxaysa oo ay sameyso, waxaa jira adduun kala duwan, qofna wuxuu u maleynayaa inay tahay saameynta cannabis. Users AutoDesk hore ugu soo ciyaaray la Desktop Architectural iyo hadda garan Revit ogaato oo ku saabsan fikradda ah ma aha sidaas fog, kuwaas oo arkay I-model Bentley ayaa sidoo kale fahamsanahay in ay u yihiin ka baxsan wax socod ka baxsan dhismayaasha iyo sababaha mawduuca ku caan ah maalin kasta:
Awooda horumarka software ee jilitaanka
Baahida loo qabo xogta isdhexgalka macluumaadka
Degdegga ah ee keena magaalooyinka dhabta ah ee moodooyinka halbeegga ah
Kala soocida xuduudaha u dhexeeya hababka kala duwan ee sida dhismaha, farshaxanka, dareemaha fog, electromechanics, naqshadeynta ...
... mana aha in aynu ka tagno dareenka aadanaha ee riyooyinka la cabo si aad u sarreeya.
Waxaan ku adkaysanayaan in arrintan of 3D cadastre iyo magaalooyinka qaabeeyey waa in ka badan ku filan in badan oo dalalka our xanuunsado tan iyo hawlaha aasaasiga ah, laakiin in aan qiro in arrinta waa in aan la iska indho tiri maxaa yeelay, dad badan oo ka mid ah magaalooyinka sida Bogota, Sao Paulo, Buenos Aires, Mexico, waayo, siinta tusaalayaasha waxay noqon kartaa tijaabooyin tijaabo ah oo ka mid ah waddamada horumaray ee Europe iyo Mareykanka waxay u arkaan inay tahay mid xiiso leh. kulan Online sida CityVille keeno fikrado wax ku ool ah qorshaynta in ay noqdaan la calaashado, si ay kuwa soo galaa ra'yiga CAD iyo ayaa noo faraxsan nidaamo la xidhiidha arrinta geospatial waa in aan indhaha ku heyno BIM ah, oo waxay u iman doontaa la intrusively ka mid ah ku dhawaad ​​maaddaama ay hadda tahay jahawareer dhexdhexaad ah oo suurtagal ah in ay naga dhigto sanadka xiga 15 ee xiga.
Sidee Bentley Systems u aragtaa ereyga BIM
Hal dariiq oo lagu arko shaqada BIM waa iyada oo lagu ogaanayo sida ay wax u tarjumeeyayaasha software u qorsheynayaan inay fuliyaan. AutoDesk waxay leedahay khadkeeda u gaarka ah, kiiskan ayaan ku tusi doonaa maaddaama ay Bentley ku muujineyso mowduuc kaas oo aan daawaday muddo ka badan seddex sano gudahood I-model.
Bentley wuxuu diiradda saarey saddexda qalab ee keenay horseedka:
Microstation for modeling information, taas oo u dhiganta AutoCAD, guddi sawir ah oo ka mid ah qalabyada falanqaynta qaabdhismeedka, jimicsiga, dhismaha, fayodhowrka, shabakadaha waddooyinka, qaabaynta, iwm.
ProjectWise isdhexgalka mashruuca, oo ah maamulaha macluumaadka oo lagu daray moodooyinka lagu dhisay Microstation
AssetWise maareynta nolosha nolosha hantida, kaas oo koontaroolaya hawlgalada walxaha nolosha dhabta ah, qaadashada taariikhdooda nolosha.
Wax walba, raadinta dhamaadka ugu dambeyntii, in kaabayaasha iyo wareegga nolosha waa barta ugu muhiimsan ee xiisaha, laakiin mar dambe sida shay inert laakiin sida maadada nool iyo ka muuqataa ku saabsan sida oo dhan dhufto ee lagu toosiyaa oo ah hab geoengineering:
Kadibna, I-Model ma aha wax ka badan weel ka mid ah diiwaannada kaabayaasha sida kaliya ee ay tahay qof.
Waxaan ku dhashay hal maalin ... waxaan haystaa rikood oo i siiya aqoonsi gooni ah oo diiwaangashan da'da. Maalin maalmaha ka mid ah wuxuu qori doonaa dhimashadayda.
Waxaan tagay xanaanada caruurta waxaanan ku dhammeeyaa shahaadada masterka ... Waxaan haystaa diiwaanada akadeemigga oo ka tarjumaysa waxbarashadayda.
Waxaan qabtay mashruucyo ... Anigu waxaan haystaa rikoodheyda oo iga dhigtay aqoontayda xirfadaheyga, xirfadaheyga, ixtiraamka kuwa kale ee ahaa shuraakadayda iyo iskaashigeyga
Waxaan is guursaday, waxaan lahaa labo caruur ah, hooyo sodon ... Waxaan haystaa faylka qoyska
Waxaan ka shaqeeyey shirkadaha 3 ... Waxaan haystaa foore shaqo
Waxaan lahaan jiray lifaaqa ... Waxaan haystaa rikoor caafimaad
Waxaan qabsaday hareeraha wareegga wareegga ... Waxaan haystaa fayl aan caadi ahayn ka hor bulshada
Oo sidaas daraaddeed, noloshayadu waa laakiin waa diiwaano taariikh ah oo taariikhdeena ka soo jeeda wakhtigii aan uuraysannay ilaa aan ka dhimanno. Haddii aan u tagno dhakhtarka waa inaad tixraacdaa feylka, haddii aan bixino canshuur, haddii aan iibino gaari ... wax walba waa qayb ka mid ah dhalashada, koriinka, tarjumidda, sameynta hanti iyo dhimasho.
Wixii Bentley ah, BIM waxay u dhigantaa tan I-qaabka sida weelasha faylasha:
Kaabayaashu waxa ay uuraysanayaan hal daqiiqo ... naqshadaynta naqshadaynta, oo lagu falanqeeyay AECOsim Sawirlayaal Sawirle, Shirkadda Tamarta, Agaasimaha Fulinta ...
Waxay qeexeysaa meesha suurtogalka ah ee la heli karo ... faylka geotechnical, oo lagu falanqeeyay PowerCivil, gINT ...
Macluumaadka ku saabsan dhismayaasha u dhow, fiilooyin fara badan, dhejisyo ... la helay Descartes, Racways, Management Cable ...
Naqshad dhismeedka wuxuu u shaqeeyaa ... oo leh STAAD, RAM ...
Nidaamka elektromagalnimada waxaa loogu talagalay ... AECOsim, OpenPlants ...
Wuxuu isku xiraa nidaamka nadaafada jirka ... WaterGEMS, SewerGEMS ...
Maalin maalmaha ka mid ah howlgalkiisa (AssetWise) ayaa la xakamayn doonaa, oo ay ku jiraan burburkiisa markuu dhimanayo.
Guushaan weyn ee Bentley waxay ku jirtaa qaab gaar ah: DGN hadda oo leh awoodda BIM oo loo yaqaan 'I-model'. Anigu waan fahamsanahay, waxaa la cabbaa sigaarcab, qiiq iyo xitaa qallafsanaan. Laakiin waa inaan qiraa, waa haboon.
Halka Bentley uu ku dhexyaalayo BIM
Aan aragno xaalad ah in magaalada oo dhan ay ku jirto qaab muuqaal ah:
Burcaddu waxay u baxdaa berrinka si ay u xalliyaan wicitaanka tuubada bulaacada ah. farsamo wuxuu qaadanayaa kiniinka oo ay qabsadaan barta halkaas oo ay tahay, ku duwo muujinaysaa in barta in ku beegan tahay kaabayaasha la xiriira, waddo la cm a Haydarooliga 20 gal, hoose 20 saldhig cm iyo sentimitir 35 sub-saldhig. Maraaba hoos line a of wasakhda PVC, 8 "dhisay 11 sano ka hor oo la helay bilood 13 dayactirka.
Haddii wax waliba lagu dhex geliyo qaab caadi ah BIM, iyada oo aan ku xirnayn nooca software loogu talagalay ama wakhtigii la dhisay, diiwaankaagu wuxuu noqonayaa mid isku mid ah. Shirkadaha 2012 hadda waxay leeyihiin dareen macquul ah: SpecWave, SITEOPS, FormSys, ElcoSystems. Bentley wuxuu doonayaa inuu jaangooyo, jago, samee qaabka saaxiibtinimo, samee erayga BIM xaqiiqda.
Maxay tahay filashooyinka Bentley ee BIM?
Iyadoo GIS ESRI mudnaanta theme iyo codsiyada ay, AutoDesk ka mid ah oo kala duwan ka soo dhismaha design in animation filim, Intergraph waxaa la dhexgeliyey ERDAS, Leica iyo qoyska kale ee EXAGON, Bentley go'aansaday inuu diirada saaro kaabayaasha laga dhismaha waddooyinka hawlgalka, dhismayaasha, warshadaha, dhufto ee la olloga ah, tareennada, quwadda, macdanta, nidaamyada hydro-caafi-dhowrka, magaalooyinka 3D, iwm Taasi waxay ina dhigaysaa in aan fahanno waxa aad raadineyso isbahaysigaagii dhawaan la lahaa Trimble, Siemens iyo sababta ay u furmayaan wadashaqeyn la leh Revit.
Calaamadeynta I-modelka waxay ka timaaddaa in loo yaqaan "Be-Inspired" Baltimore. faylalka tacliimeed ee mashaariicda, baaxadda abaalmarinta ugu danbeeyay iyo Bangalore ee Hindiya, adkeysi ku Sentech, OPEX, faylalka tacliimeed ee dheelitiro, taas oo ay ku bedelan kartaa shatiyada on baahida ... waxa ay u muuqataa in ay xog ku filan in kaabayaasha hadlaan, waayo, iyada oo diiwaankaaga:
Heshiiska Trimble ee 2012 kaas oo ka dhigay inay galaan fikradda ah daba-galka x, y, z ee la xidhiidha walax leh aqoonsi gaar ah.
Qaabaynta qaab-dhismeedyada dhulka hoostiisa ayaa lagu ogaaday baaritaanka radar iyo abuuray Pointools of Descartes
ka mid noqoshada shaqada uu nool yahay in AssetWise, kaas oo ka digay in dayactirka waa in la sameeyaa ay sabab u tahay dhulgariirka ee 4 sano hoos ay noolaa iyo dib u eegistii dhismaha jidka falaa.
Kordhinta qandaraaska dayactirka ee loo sameeyay lineWise, kaas oo u oggolaanaya inuu hubiyo haddii ay tahay waqtiga damaanadda ama u dhiganta in la fuliyo kharashka cusub.
Si aad u soo gashid wadada dayactirka waxaa ka mid ah saameyn ku yeelanshada gaadiidka wadada ee wadada wadada taasoo u keeni doonta ciriiri saacadaha ugu sarraysa ... iwm, iyo wixii kale ee waxyeellooyinka kale ee nidaamku u saari karo waqti cayiman oo dhan.
Ugu dambeyntii, maalin walba waxaan arki doonaa BIM waxqabadkeena farsamada iyo maamulka, inkasta oo aan la socon magacaas gaar ahaaneed iyo sida aan arkeyno, ka baxsan dhismayaasha oo ahaa ereyga fikradda ugu horeysay ee loo sameeyey. Isku xirnaanta aan hadda ku raaxeysaneyno iyo isbeddelka arjiyada kombuyuutarku ay samayn doonaan tan, taas oo aan ku muujinayo imtixaanka Bentley, dhab ah.
Sida laga soo xigtay Wikipdedia: BIM waa hab ka mid ah guud ahaan iyo maareynta kaabayaasha xogta lagu jiro wareegga ay nolosha la isticmaalayo dhismayaasha software Tusaale fiican oo firfircoon ee sadex dhinac iyo in waqtiga dhabta ah, si loo yareeyo qashinka waqti iyo khayraadka ee design iyo dhismaha . Marxaladani waxay soo saartaa kaabayaasha model macluumaadka (BIM sidoo kale loo soo gaabiyo) oo daboolaya geometry dhismaha, xiriirka da'ayeen, macluumaadka juqraafiyeed, iyo cadadka iyo guryaha oo ka mid ah qaybaha kaabayaasha.
Bentley, BIM waa kaabayaal sirdoon.
Post Previous" Hore Mid ka mid ah habeenkii ee abaalmarinta ka mid ah la waxyoonay
Post Next Dhamaadka adduunka 2012 Maxaa dhacaya haddii mansuiyadu saxan yihiin?Next »
Hal Jawaab "Fahmitaanka fikradda BIM, marka laga hadlayo Nidaamka Bentley"
marcellin isagu wuxuu leeyahay:
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan nidaamka dhibcaha dariiqa loogu talagalay qaababka 3D iyo nidaamyada GIS